Wonke umuntu wesifazane noma intombazane (kuphela uma akahlali Isigodlo noma esiqhingini desert) ekuphileni kwakhe wahlangana abafana abaningi futhi amadoda. Futhi akukho noyedwa wayengenayise eduze ubuhlobo obufudumele. Ngokukhethekile, obutjhideleneko ngoba kukhona nje imizwa yothando, uthando ngokomoya futhi nokuzwelana, lapho limane akudingekile, ikakhulukazi esemncane. Kodwa ngokuvamile kwenzeka ukuthi namuhla isoka zamanje ngosuku olulandelayo iba wangaphambili. Nokho, musa ukuzwana, baba nengxabano, kodwa nje wahlangana nabanye, futhi kwakubonakala kangcono - noma yini kungenzeka kulokhu kuphila. Futhi ngezinye izikhathi, kuyenzeka ukuthi amantombazane aqala ukuphupha ngani yabo ex-isoka, okuyinto wake wahlobanisa ubudlelwane. Kusho ukuthini uma iphupho ex-isoka? Kungani wayengaphuli ukuphupha nokuthi sisho ukuthini? Kunemibuzo eminingi ...
Uma iphupho ex-isoka, njalo kusho ukuthi ekupheleni usengakayitholi masingakwazi hamba nalo, futhi inhliziyo yakho sisekhona indawo kuye. Phela, uke okuningi ikhulekiwe kuzinga enganakile ungazange wakhulula indoda futhi umuzwa wakho hhayi acime ngokuphelele enhliziyweni ngisho inhlansi yethemba ngoba resumption of ubudlelwane. Ngakho-ke, le nsizwa futhi livela amaphupho akho. Niyakhumbula kuye, into akabakhohlwa lo muntu. Uma iphupho ex-isoka, futhi uwena naye, futhi uzizwa okuhle sengathi akwenzekanga lutho, kusho ukuthi uyokwazi ukuphila ngaphandle kwakhe ekuphileni kwangempela, umkhulula lo muntu, futhi inhliziyo yakho livulekele ngakhe ubuhlobo obusha. uzwe ubuhlungu bokuhlukaniswa ayisekho sikukhubekisa enihlupheka ngenxa yawo. Uma ephusheni ohlangana nozakwethu wangaphambili futhi ofunda nabo, bese ngokushesha kakhulu uzothola umyalezo ovela kumngane ngubani kude nawe.
Uma iphupho wangaphambili Insizwa ethile yake phambi ibaluleke kakhulu indoda wena, lokhu kusho ukuthi ematfuba ukuxabana sina futhi ingxenye ne lover zamanje. Udinga ukwehlisa umoya ayeke qhathanisa isoka elisha nge ex-isoka, futhi kulapho-ke akudingekile ukuba ukhulume ngokuzwakalayo. Ephusheni, ababekade eduze ukubukela noma okulandelayo na? Ngakho, empeleni, akazange bayobuna imizwa yakho, kodwa kudala noma kunjalo. Uma iphupho ex-isoka, futhi amange - ulungele amaqembu kanye imihlangano ngoba ngawo nabangane babo wesikhathi eside. Fight ne iphupho zakhe zangaphambili - a izenzakalo ezimnandi futhi ezingalindelekile ekuphileni.
abesifazane Wehlukanisile ungakwazi dream owayengumyeni wakhe. Uma dream wena yokuvuselela ubuhlobo nge umyeni wakhe wangaphambili noma kunjalo azizwe injabulo, ngokoqobo kuwe ukuphila ngokuthula futhi kahle, yena akazange empeleni bacabanga nhlobo manje, wonke amanxeba wangaphambili futhi ukhohliwe, elashwe nokwelashwa. Ufuna ukuba emuva futhi yena nomyeni wakhe, uma isisa angiqabule kuye sifana ubuthongo. Ex-umyeni, ugqoke futhi ngifuna ezimbi, cishe like a bum, at ubuhle bakho yangaphandle futhi style nenhle futhi isimo okusezingeni eliphezulu nomphakathi - iphupho kusho isifiso sakho kufihlwe ukuba aziphindiselele ngokubulala. Uma iphupho, kunalokho, wena kabi ugqoke futhi buthule kunokuba ne owayengumyeni wakhe, iphupho kusho ukuthi wena udabuke kakhulu ngokwabo ngemva kwesehlukaniso.
Isikhathi esining impela uyaphupha libonise isimo sangaphakathi umuntu. Futhi uma dream mayelana umuntu othize ngokuvamile kakhulu, njalo kusho ukuthi namanje ngeke akuvumele ungakwazi kuye ekuphileni kwakho nokuthuthukisa ibhalansi yabo yangaphakathi. Ngakho kunalokho nzima ngaye ukuba aphile. Ngakho zama ukuphazamisa, ukubandakanya ngokwakho, uzithola imisebenzi ezithakazelisayo nokuzilibazisa. Yenzani izinto ekugcineni nje, bese ube nesikhathi ngokuqinisekile izohlala imicabango sad, ukudabuka, izinkumbulo ezibuhlungu nezinye izincwadi ezivamile kancane. usuku lakho ngeke abe matasa ngezinto ezibalulekile, futhi uzoqala ukulala ngakho zwí ukuthi lutho ekuseni ngeke zikhunjulwe, ngoba umzimba uyobe uphumule ngokugcwele ngesikhathi sokulala, alukwazi ukudlala wonke nakho kosuku.
Kungani iphupho yephakethe nezimpisi ehlasela friendly noma ukubukela
Kungani iphupho ujantshi kanye isitimela: Dream Incwadi
Dream Ukuhunyushwa: dream ubisi - lokho?
Kungani iphupho umchamo? Sifunda!
Ngathola umcebo incazelo iphupho
Izibonelo-e-mail: Ukwenza isinqumo esihle
Lokho okubukeka njengokuhlukumeza ubuhlungu bokubeletha? Ubuhlungu nokubeletha kuqhathaniswa ne yini enye kungenzeka?
Nosimende 120mm: izici (isithombe)
Indlela yokwenza nyangazonke gone ngokushesha. izindlela ezilula
UProfesa sika Corner, Alushta, eCrimea: ukuphumula. Amahhotela, amabhishi, abezimboni ezizimele